कतै कागतीका बोक्रा फ्याक्ने गर्नु भएकाे त छैन ? त्यसो भए अब देखि नफाल्नुस, पढौं यसका गुणकारी फाइदा – Annapurna Daily
कतै कागतीका बोक्रा फ्याक्ने गर्नु भएकाे त छैन ? त्यसो भए अब देखि नफाल्नुस, पढौं यसका गुणकारी फाइदा
On Jun 9, 2021 1,603
एजेन्सी । गर्मीमा मानिसहरू अत्यधिक कागती सेवन गर्छन् । पौष्टिक गुणहरूले भरपूर कागतीले शरीरलाई अनेकौं रोगबाट टाढा राख्छ । हामीहरू कागतीको बोक्रालाई बेकार ठानेर फ्याँक्छौं र बोक्रा पनि बहुगुणी हुन्छ । यसमा भएको पेक्टिन नामक तत्त्वले शरीरमा जमेको अतिरिक्त बोसोलाई घटाउँछ । यसका अन्य फाइदा यसप्रकार छन् :
तनाव: आजकल हरेक व्यक्ति तनावग्रस्त छ । तनावबाट छुटकारा पाउनका लागि कागतीको बोक्रा उत्तम उपाय हो । यसमा भएको फ्लेभोनाइडले तनाव घटाउन सहायता गर्छ । क्यान्सर: कागतीको बोक्रामा भएको तत्त्वले क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगबाट लड्न पनि मद्दत गर्छ ।
दाँत: कागतीको बोक्रामा दशवटा कागतीको रसभन्दा १० गुणा बढी भिटामिन र क्याल्सियम पाइन्छ । यसले दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउँछ । मुटु: पोटेसियमले भरिएको कागतीको बोक्राले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ । यसले हृदयघात र मधुमेह जस्ता रोगबाट पनि बचाउँछ । छाला: कागतीको बोक्राले छालासम्बन्धी समस्या हटाउँछ । यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले छाला निखार्छ ।
यो पनि पढ्नुस : पुदिनाको सेवन गर्ने गर्नु भएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला,यस्तो बन्दै छ पुदिना सेवन गर्नेहरुको शरीर !